အင်္ဂလန်အသင်း လူစာရင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင် | FOX Sports Myanmar
အင်တာနေရှင်နယ်ဘောလုံး | အောကျတိုဘာ 10, 2019
အင်္ဂလန်အသင်း လူစာရင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင်
Keepy-uppies HARD MODE: Thiago x Rodri of Spain
လက်စတာစီးတီးအသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြသနေခဲ့ရပြီး အင်္ဂလန်အသင်းကြီးမှာရွေးချယ်ခြင်းခံရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ မက်ဒီဆင်အတွက်တော့ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ကံဆိုးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ။
ယခုနှစ်ရာသီမှာလည်းအသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနိုင်နေခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင်ကို အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြ ဆောက်ဂိတ်က ယူရိုခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေကစားရမယ့် အသင်းလူစာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် အဖျားဝေဒနာကြောင့် ချက်အသင်း ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအသင်းတွေနဲ့ ကစားမယ့်အသင်းလူစာရင်းကနေ မက်ဒီဆင် နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
James Maddison has withdrawn from the @England squad through illness.
Get well soon, Madders! 👍 pic.twitter.com/G8Enr0cgMS
— Leicester City (@LCFC) October 10, 2019
ယူနိုက်တက်အသင်းကနေ အဓိက ပစ်မှတ်ထားခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရတဲ့ မက်ဒီဆင်ဟာ ကလပ်နဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး မက်ဒီဆင်ရဲ့နေရာမှာတော့ အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဖေဘီယန်ဒပ်ကို အစားထိုးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ သောကြာနေ့မှာ ချက်အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး (၃) ရက်အကြာမှာ ဘူဂေးလ်ရီးယားအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာပါ။
လက်စတာစီးတီးအသင်းအတကြ်ေူခစမြ်ူးပသနေခဲ့ရ္ဘပီး အဂဿလန်အသင်းဋ္ဌကီးမြာရြေးခဵယ်ူခင်းခံရဖိုႛ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတဲ့ မက်ဒီဆင်အတက်ြတော့ ဒီတစ်ဋ္ဌကိမ်မြာလည်း ကံဆိုးမနြဲႛ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရူပန်ပၝ္ဘပီ။
ယခိုံစ်ြရာသီမြာလည်းအသင်းအတကြ်ေူခစမြ်ူးပိုံင်နေခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင်ကို အဂဿလန်အသင်းနည်ူးပ ဆောက်ဂိတ်က ယူရိုေူခစစ်ပြဲစဉ်တေကြစားရမယ့် အသင်းလူစာရင်းမြာ ရြေးခဵယ်ခဲ့ပေမယ့် အဖဵားဝေဒနာေုကာင့် ခဵက်အသင်း ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယားအသင်းတေနြဲႛ ကစားမယ့်အသင်းလူစာရင်းကနေ မက်ဒီဆင်ိံတ်ြထက်ြခဲ့ရပၝတယ်။
ယိူိုံက်တက်အသင်းကနေ အဓိက ပစ်မတ်ြထားခေၞယူဖိုႛစောင့်ုကည့်ူခင်းခံနေရတဲ့ မက်ဒီဆင်ဟာ ကလပ်နဲႛူပန်လည်ပူးပေၝင်းသြားမြာူဖစ်္ဘပီး မက်ဒီဆင်ရဲႚနေရာမြာတော့ အဲဗာတန်အသင်းရဲႚ ကငြ်းလယ်လူ ဖေဘီယန်ဒပ်ကို အစားထိုးခေၞယူခဲ့ပၝတယ်။အဂဿလန်အသင်းကတော့ သောုကာနေႛမြာ ခဵက်အသင်းနဲႛ ရင်ဆိုင်ရမြာူဖစ်္ဘပီး (၃) ရက်အုကာမြာ ဘူဂေးလ်ရီးယားအသင်းနဲႛ ယဉ်္ဘြပိင်ြကစားရမြာပၝ။
Home Football International Football အင်္ဂလန်အသင်း လူစာရင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ မက်ဒီဆင်